Kedu okpu igwe kachasị mma maka ego ahụ? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Okpu okpu agha Scott - otu esi edozi
Okpu okpu agha Scott - otu esi edozi
Kedu okpu igwe kachasị mma maka ego ahụ?
NA-EBEREIgwe kwụ otu ebe-Okpu aghaHyban 2.0.
Cannondale Intent MIPS OkenyeOkpu agha.
TụgharịaDebanye aha MIPS Ndị okenye na-agba ịnyịnya ígwèOkpu agha.
LUMOS matriks SmartOkpu agha.
Nyochaa CM-1Okpu igwemaka Okenye Nkata.
Schwinn ThrasherIgwe okpu igwe.
Puku OchieIgwe okpu igwe.
Eprel 7 2021
Ndị nọ n'okporo ámá ga-ahụ gị site n'ebe dị anya. Nokwesighi iyi akwa dị iche iche. Ma n'ihi na ọ bụ okpu igwe eji agba ịnyịnya ibu, ịnwere ike ịnụ ụtọ egwu ma were LIVALL na Bluetooth na igwe okwu.
A na-etinye ha na ntị ka ị ghara ịdọpụ uche gị n'okporo ụzọ. Enwekwara ọrụ Walkie-talkie. Nke a na-enye aka karịsịa mgbe ị na-eme njem n'otu ìgwè, ebe ọ na-enye gị ohere isoro ndị njem ibe gị kwukọrịta okwu dị nfe.
Agbanyeghị, ọrụ kachasị mkpa nke okpu agha a bụ eleghi anya nke ga - enyere gị aka izipu akara SOS na mberede. Nwere ike iji nke a site na ijikọ okpu agha na ngwa LIVALL ịnya. Ọ bụrụ na ihe emee, akara mkpuchi mberede nke okpu agha ahụ ga-agbanye wee nwee ike ịkpọtụrụ ndị kọntaktị gị ozugbo.
Nwere ike idozi ya site na iji ọkpụkpọ na azụ na kemeghi straps. Ndị a na-ahụ na ị na-eyi akụrụngwa nke ọma na ị nwere udo nke uche. Uru ya bu: - O na - abia na Bluetooth na igwe okwu; - Ọ gụnyere ọrụ Walkie-talkie; - Ọ dakọtara na Ndụ IVnyịnya Ndụ; Na - Ọ nwere ọrụ nchekwa niile dị mkpa.
Otú ọ dị, ọ dị oke ọnụ. Na-akpachapụghị anya na LIVALL. Okpu ịnyịnya ígwè a mara mma nwere ọrụ niile dị mkpa nke na-ekwe nkwa nchekwa gị n'okporo ụzọ, nke na-eme ya ego bara uru n'agbanyeghị ọnụahịa ya.
Sena X1 na-esote nke anọ. Sena X1 bụ onye ọrụ-enyi na enyi atọ-button imewe na n'akụkụ na dị mfe ịnyagharịa na-eji. Ihe mkpuchi a bụ 12.35 oz na-abịa na batrị lithium polymer nke na-enye oge 16 nke oge okwu na oge elekere 3.5.
Ọ bụ okpu igwe igwe igwe etinyere na Bluetooth na ndị okwu ọdịyo nke HD na igwe okwu. Nwere ike ijikọ ya na ekwentị gị ma nweta ngwa dị iche iche dịka ngwa ngwa, GPS na egwu. Pụrụ ọbụna ịkpọ oku ekwentị.
Site na okpu agha a ị nwere ike ịgwa mmadụ atọ ndị ọzọ okwu ihe karịrị 800 m na mbara ala. O dakọtara na ngwa Bluetooth ndị ọzọ na ngwa ọdịnala ekwentị maka nnukwu otu intercom na njikwa ọrụ. Iji mee ka ihe ka mma, ọ na-eme ka teknụzụ Advanced Noise Control na-ebelata ifufe na mkpọtụ ụda ka ị nwee ike ikwurịta okwu mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè.
Uru ya bu: - O dakọtara na ngwa bluetooth; - Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ama ngwa ọdịnala; - Ọ dị mfe iji; - Ọ na-enye ogologo oge ọrụ; na - Ọ na-onwem na HD audio ọkà okwu na a okwu. Agbanyeghị, ọghọm ndị a bụ: - Ọ nweghị ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ ọkụ; na - O nweghi ihe nkpu anwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ okpu igwe mara mma na arụmọrụ Bluetooth, Sera X1 bụ ezigbo nhọrọ maka gị.
Yabụ ị na-ejikọ oge niile n'oge njem igwe kwụ otu ebe gị. Chọtabeghị okpu igwe igwe na-emezu ihe ị chọrọ? Nọgide na-ele anya, anyị nwere ọtụtụ maka gị. Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-eleta ọwa anyị, denye aha na ọwa wee pịa akara mgbịrịgba iji nweta ọkwa gbasara isiokwu anyị ndị ọzọ.
Ngwaahịa nke atọ na ndepụta anyị bụ LUMOS Kickstart. LUMOS Kickstart na-enye gị ọkụ na ihe ngosi n'isi gị ekele maka ọkụ ọkụ ya. Ọ nwere ọkụ na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha n'ihu na uhie LED na azụ ka enwere ike ịhụ gị n'okporo ámá, ọkachasị n'abalị.
Ọrụ Bluetooth nwere ike ịmekọrịta eriri ikuku bọtịnụ abụọ na akara aka gị na okpu agha mgbe ị gbanyere ya. Ya mere, mgbe ị pịrị bọtịnụ aka ekpe ma ọ bụ aka nri, okpu agha gị ga-enwu gbaa n'akụkụ kwesịrị ekwesị. Igwe na-achịkwa mmiri anaghị egbochi mmiri, yabụ ịnwere ike iji ọrụ a ọbụlagodi mgbe mmiri na-ezo.
Okpu agha a kwekọkwara na LUMOS Helmet APP. Nke a na - enye gị ohere ịhazi ụda nke akara ngosi ntụgharị. O nwekwara ọkụ ịdọ aka na ntị akpaghị aka.
Tinyere okpu agha nke Acromrometer emere okpu agha, njirimara a na-enyere aka iulateomi ọkụ igwe breeki. Ọ na - achọpụta mgbe ị na - akwụsị nwayọ ọsịsọ maọbụ na - akwụsị na mberede. N'okwu a, ọkụ na azụ ga-acha uhie uhie.
Batrị Kickstart LUMOS nwere ike ịdịru elekere isii. Ọ dị mma maka oge 30 ruo 45 nke igwe kwụ otu ebe kwa ụbọchị. Mgbe batrị tọgbọ chakoo, cheta ịkwụnye okpu agha na njikwa.
Ọ dị ihe dị ka lb 1 ma tụọ 21.3 ruo 24.4 sentimita.
Ọ bụ ezie na o kwesịghị iji dochie ọkụ ihu igwe gị na azụ ya, okpu a nwere ike ime ka ịnyịnya gị ghara ịnwe nsogbu site na iwepu mkpa ịnye akara aka. Uru ya bu: - O nwere nhazi di nma; - Ọ na-abịa na-enwu gbaa Ikanam ọkụ; na - Ndị blinkers ya bara uru. Kaosiladị, ọghọm ndị a bụ: - Ọ dị arọ; - Ọ bụ naanị dị na otu size; na - ọ dị oke ọnụ.
Nchekwa-Tec Tyr bụ okpu agha mara mma nke nwere ihe ejiri ọkụ, ọkụ breeki na ọkụ LED na ọkụ azụ. A kwadebere ya na MIPS ma ọ bụ Multidirectional Impact Protection System, teknụzụ na-ebu ụzọ na-ebu ụzọ ewepụ iji belata ikike ntụgharị nke nwere ike ịpụta na ụfọdụ mmetụta. Mpụga elu nke okpu agha ahụ bụ nke polycarbonate.
Ọ na-abịa na ịkpụzi Coolmax na-ebu maka nkedo ụfụfụ ya iji nye nkasi obi ma hụ na nkwụsi ike kachasị. Okpu igwe igwe kwụ otu ebe a na - agụnye ndị na - ekwu okwu ọkpụkpụ Bluetooth na igwe okwu. Site na njirimara ndị a, ị nwere ike ige egwu ma ọ bụ kpọọ oku mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè gị n'emeghị ka ihe ọghọm okporo ụzọ pụta.
O nwekwara ikuku ikuku na-enye gị ohere ijikwa ọkụ ọkụ dị n'ime na n'ihu dị ka akara ntụgharị. Na mgbakwunye, a kwadebere ya na ọkụ ọkụ breeki na-akpaghị aka ka ị wee hụ gị n'akụkụ niile. Nchekwa-Tec Tyr na-abịa na akwụkwọ ikike nwere oke afọ 2.
Okpu agha a na-ezutekwa ọtụtụ ụkpụrụ nchekwa, gụnyere njikwa mmiri na-enweghị mmiri dịka ọkọlọtọ IPX6, okpu agha na njikwa ntanetị dịka ọkọlọtọ IP65, yana asambodo CPSC. Uru ya bu: - O di nfe; - Ọ bụ kemeghi; - Ọ nwere ezigbo okwu Bluetooth; na - ọ na-abịa na a 2 afọ akwụkwọ ikike. Otú ọ dị, ndị na-ebu ya adịghị enwe obi ụtọ na mbụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ okpu igwe eji igwe igwe eji arụ ọrụ na teknụzụ ọhụụ, gbalịa Safe-Tec Tyr 3. Okpu agha a mara mma na-enye gị ohere ijikọ yana nchekwa na njem. Tupu anyị ekpughe nọmba 1, gbaa mbọ hụ na ịkọwapụtakwara nkọwa dị n’okpuru maka azụmahịa ndị ọhụrụ na nke ọ bụla n’ime ihe ndị a.
Jide n'aka na ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ ruo ụbọchị na ngwaahịa kachasị mma na ahịa. Ka emechara, anyị n'elu smart igwe kwụ otu ebe bụ Sena R1. Sena R1 bụ okpu agha US-CPSC nke nwere asambodo EPS siri ike na shei siri ike nke ejiri rọba polymer.
Iji okpu agha a ị nwere ike ige ntị pọdkastị, lelee ọdụ redio, nweta Google Maps na ọtụtụ ndị ọzọ. I nwekwara ike ịkpọ ekwentị. Igwe okwu na-eme mkpọtụ na-eme ka o doo anya na onye nke ọzọ nọ n’ahịrị nwere ike ịnụ gị ọbụlagodi ma ị nọrọ n’etiti okporo ámá.
Nwere ike iji nke a ma ọ bụrụhaala na ị niile nọ n'ime oke dị ọkara kilomita. Uru ya bu: - O wuru igwe na-ekwu okwu n'ime ogbe okpu agha; - Ọ n’eme ka nkwukọrịta okwu n’etiti okpu agha; - Ọ gụnyere teknụzụ nchedo mkpọtụ; na - Ọ na-enye ohere dị iche iche ngwa ọdịnala site na smartphone njikọ. Otú ọ dị, ọ dị oke ọnụ.
Daalụ maka ikiri! Ọ bụrụ na anyị enyerela gị aka ọ bụla, biko pịa bọtịnụ 'Dịka' na 'Idenye aha'. Lee gị n'isiokwu ndị na-esonụ!
Kedu okpu igwe Nino Schurter ji?
Scott Centric gbakwunyere
Blake: Oh, nabata, ndị mara mma. Ahụ na-anwụ m. Ike gwụrụ m, ọbụlagodi m wuru ọgba igwe, rie achicha, rie ya, m wuru ọbụna usoro ifufe ma gba ya.
Agwara m achicha karịa, machị ya, nọdụ na sofa ahụ ruo ọtụtụ awa ma lelee ọtụtụ isiokwu GMBN ọ bụ nzuzu na m megoro ọtụtụ ịgba ịnyịnya ọ bụ onye nzuzu naanị ya nwoke m chọrọ na m nwere ike ime karịa. Kama, anam eme ihe a.Whoa, ndi enyi.Enweghi enyi .Nnwe enyi, enyi na enyi, enyi na enyi, ndi enyi.
Igbe. Kedu ihe bụ nke ahụ? Ka anyi nweta ya n’ebe a na-adọba ụgbọala, dude. Enwere 'Hey, Blake.
Kedu ka ọ si aga? Anyị maara na ị na-atụ uche ịkwọ ụgbọala gị na ndị enyi gị n'oge a, mana otu esi eji otu n'ime ha mee ka mmadụ gaa ebe ọ bụla, hụrụ n'anya, Tacx. 'Na-agba ọsọ? Na-apụ n'anya. Daalụ Tacx maka izipu ihe a ka m nwee ike ịnya mmadụ ebe ọ bụla ọ nọ n’ụwa.
Kedu onye m ga-ede ozi na onye? Ebee ka ekwentị m dị? Ebee ka ekwentị m dị? Ama m . Ka m hụ, kọntaktị. Sam Pilgrim, 100%, ọ gaghị enwe otu.
Doddy? Mba Neil? Mba, mba. Sean Connery? Olee otú o si anụ? Mba, o ghaghi aza oku m.
Amaara m Nino Schurter. Aga m edegara ya ozi. Nke ahụ na-ewetaghachi azụ, egwu, oke ihe mgbu na ncheta nke oh, naanị ihe ọ bụla.
Nino Schurter. Nino Schurter: Ọ dị mma, ka anyị nwaa. Blake: Nwoke, a ga m eche ihe m ga-eme ntakịrị karịa maka na nke a bụ NinoSchurter.
Ọ bụghị Neil ma ọ bụ Richard ma ọ bụ Doddy. M ga-echebara echiche banyere akụkụ ya. Aga m anwale nkà.
Gịnị banyere mgbanwe taya? Ee, nihi na o kariri igbanwe igwe ya karia igbanwe taya. Nke ahụ nwere ike ịgwụ ya ike ntakịrị, nye m ohere ịlụ ọgụ. Emela.
Nke a abụghị nkwa. Nke a abụghị nkwa. Aga m edegara ya ozi.
Enweghị m ike ịsị na emebeghị m ihe a na ndụ m, mana m ga-anwale. Nino: O di ugwu ebe a, huh, Blake. O kwesịrị ịdị gị otú ahụ.
ogige igwe kwụ otu ebe
Blake: Nke a bụ nsogbu kachasị njọ. Akpọrọ m nke ahụ asị, mana m ga-eche nsogbu ọzọ ihu, okporo ígwè na-anọchi. Rail guzoro, adịghị amasị ha.
Achọla ha. Enwere m mmasị iso gị, ọ bụghị iguzo, ana m enye ya ohere a. Ibet Nino nwere ihe ole na ole aghụghọ ya.
Otu aka.Wa, ee, nke ahụ dị nso. Mba-ejighị aka, onye enweghị ụkwụ, enweghị ụkwụ, ee, rie Nino a.
Aga m ezigara ya ozi, echere m na emere m ihe niile nke ọma, echere m na emere m ihe niile nke ọma, zipu ozi ederede, kwụrụ ọtọ, achọghị ya. Kedu ka ọ na-aga, Nino? Kedu ka ọ si aga? Ahụ́ na-ama m jijiji. Nino: Ee, kwa, ee.
Ka anyị lee ka o si aga. Ọ dị mma izute ọzọ na-- Blake: Ee, adị m njikere. Ị dịla njikere? Nino: M jikerekwa.
Kedu ihe anyị na-eme na mbụ? Blake: Amaghị m. Ma eleghị anya, anyị kwesịrị ime nyocha arụmọrụ. Nino: Ule oru oma, nke ozo kariri.
Blake: Ee. Nino: Odi mma, mgbe ahu igha ala. Ogologo oge ole ka anyị ga-eme nke a? Blake: sekọnd ise, echere m.
Nino: Sekọnd ise, ọ dị mma. Blake: Atọ, abụọ, otu. Bịanụ.
Nino: Olee ebe i no, Blake? Blake: Ebee ka m nọ? M nọ n’azụ gị. Nino: Huh? Nke ahụ bụ already-- Blake: Nke ahụ ọ bụ sekọnd ise? Nino: Blake: Nino, nke ahụ siri ike. Nino: Ee, o siri ike.
Ọ na-esiri onye mbụ ike mgbe ọ gwụchara ngwa ngwa, mana ọ dị mma. I mere nke ọma. Blake: Daalụ enyi.
Nino: Imara ihe m na-acho bu ezigbo igwe kwụ otu ebe. Blake: Echere m na ọ bụ agbụrụ ahụ. Nino: Mba, mba, nke ahu bu obere ule.
Amaara m ụzọ dị mma ebe a, ezigbo ụzọ igwe kwụ otu ebe. Naanị soro m ka m ga-egosi gị. Dịkwa mma Blake, lee, anyị nọ n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe.
Ị dịla njikere? Blake: Naanị, Nino. Nino: Were ume miri emi na ato, abuo, otu, gawa. Nino: Oh, ahead no n’iru ngbo.
bike enyi na enyi obodo
Blake: Ọ bụghị ogologo oge, echere m, Nino. Nino: Odi nma. Blake: Ngwanu.
Nino: Bịa na Blake, kpoo, kwasie ike. Blake: Nke ahụ siri ike. Ọ ka na-ada m n’isi.
Nino: O di mma, gbagoo ebe a. Anọ m nso na njedebe ngwụcha ikpeazụ. Bịa na Blake, pịa, kpoo, kwalie.
Eeh. Nino: Enwerem oge oge. Nkeji isii, 09.
You tụgharịrị laghachi azụ ma ọ bụ gịnị? Nino: Ngwanu, rue ncha. Blake: Ee. Nino: Oh, banye na ohia.
Mma. Chei, nkeji asatọ, nke ahụ dị mma. Blake: Nkeji abụọ ihe, chaị.
Bịanụ ka nwere ụzọ dị ukwuu ị ga-aga. Nino: Ee, ma ihe dika gi karie ka ogha akpochaalam na sekọnd ise ndia. Blake: Ee.
Nino: N'agba mba ozo ichoro ime ihe oma kariri, ma ikwesiri ime ka onu mbata kacha elu. Nke a bụ ihe gbasara oke, yabụ ee. Ngwa, Blake, daalụ maka ịkpọm.
Ezigbo obi ụtọ na-agba ịnyịnya ya enwere m olileanya na ị masịrị ya. Blake: Ee, eziokwu. Ọ bụ n'ezie ọtụtụ ọchị.
Ma eleghị anya, otu ụbọchị m ga-enwe gị Ma eleghị anya oge ọzọ anyị ga-eme ihe ịma aka na-awụlikwa elu unyi. Nino: Eeh. Na-ele anya otu.
Ọ ga-amasị m isoro gị na-awụli elu unyi. Daalụ maka ịgba ịnyịnya ahụ enwere m obere ọchị. Nwee ahụ ike.
Hụ gị ọzọ n'oge adịghị anya. Blake: Ee. Jisie ike.
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ịme ụdị ọdịnaya a ka m hụ maka onwe gị Na-ata ahụhụ nke ukwuu, na-agba ọsọ akụkọ dịka Nino Schurter, nye anyị mkpịsị aka dị ka. Aga m ele anya na nke na-esote, anyị ga-ahụ gị. Zipu.
Na-ekpo ọkụ. Emecha m, emechaala m, emeela m.
Kedu ihe bụ igwe nchekwa igwe kachasị nchebe?
Scott Centric Plus bụNino Schurter siọhụrụokpu agha.Ọgọst 19 2020
Kwesịrị ịmanye ndị na-agba ịnyịnya ígwè ka ha kpu okpu agha, ọ bụ esemokwu nke emere nkwa iji kpalite esemokwu Onye ọ bụla nwere echiche. Nsogbu bụ na ha anaghị adabere na ihe akaebe Ka anyị bido site na ihe kwụ ọtọ Enweghị m nsogbu na okpu igwe. M na-agba ịnyịnya ígwè, M na-emekarị na-eyi otu na mgbe m daa apụ m igwe kwụ otu ebe na m okpu agha na-ekwesị ruo eruo na m na-agba na ihe na ala na-agba. Ihe akaebe na-egosi na ọ ga-enyere m aka, yabụ mee ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè kpu okpu agha, ebe ọ nọ, ebe ọ malitere inwe mgbagwoju anya. Nke mbu, ka anyi nuru site na dibia nke metutara isi ya n’ahu n’afọ gara aga. M gbara ịnyịnya ígwè gafee Amerịkà, enyo ihu igwe na-efegharị kụrụ m n’azụ isi ya na 70 mph, kụpụ m n’ịgba ịnyịnya ígwè m wee gaa n’okporo ámá, mana m enwere m Ọchioma m yi okpu agha ma ọ bụrụ na ọ bụghị m, okpu agha doro anya nwere ike ịzọpụta ndụ, mana ugbu a, ka anyị nụ site na dọkịta ọzọ na ọ dị mma ọ bụghị naanị maka ndị mmadụ n'otu n'otu kamakwa maka ndị mmadụ n'ozuzu - ezigbo ihe akaebe na ọ na-etinye okpu igwe. ndị mmadụ na-adịchaghị adọrọ mmasị mmadụ ma o yikwara ka ọ ga-ebelata oke ịgba ịnyịnya ígwè, ma ọtụtụ ihe akaebe na-egosi na abamuru nke ahụike nke ịgba ịnyịnya karịrị ihe egwu ahụike.
igwefoto igwe kwụ otu ebe
Ọzọkwa, ịgba ịnyịnya ígwè adịghị ihe dị egwu dịka ndị mmadụ chere na e nwere otu ọnwụ na UK maka ihe dịka 30 nde kilomita agba gburugburu, nke ahụ bụ ihe dị ka otu narị ndị ịgba ịnyịnya ígwè na-egbu kwa afọ, n'eziokwu ọ na-ekwu, 'ije mbụ ma nwụọ n'otu afọ ahụ karịrị 85,000 ndị mmadụ na-etolite n'oge na-ebute ọrịa nke ibi ndụ adịghị arụ ọrụ - ọtụtụ ihe dịka ọrịa obi, ọrịa shuga na kansa, ma ndị a bụ ọrịa ndị ahụ '. Gba ịnyịnya ígwè nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ na mgbochi. Cgba ịnyịnya ígwè bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji lụ ọgụ ịnyịnya ígwè dị ka akụkụ nke okporo ụzọ dịka akụkụ nke ndụ kwa ụbọchị pụtara na ndị mmadụ na-emega ahụ oge niile. Ọ bụghị ihe ha ga-aga mgbatị ahụ - ha nwere ike ime ya - ọ na-amasị ha ịrụ ọrụ na ya, ịgagharị n'ụlọ ahịa, wdg.
Cingmanye iyi okpu igwe, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ mere ka ịgba ịnyịnya ígwè dị nchebe, ọ ka ga-abụ ọnụ ahịa zuru oke na ọha na-eduga ahụike na ihe ọzọ na-eme mgbe ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-etinye ihe mkpuchi nke yiri ka ọ gbanyeere na ọdịdị anyị Ọkà mmụta sayensị na-akpọ ya ụgwọ ụgwọ. N’ụzọ dị mkpa, mgbe inwerekwu nchebe, ị na-etinyekarị nsogbu karịa. Ee anyị nwere ndị mmadụ na ụlọ nyocha ma anyị na-agwa ha na anyị ga-eleba anya na mkpebi mgbe ha nwere ngwaọrụ nyocha na okpu agha ha wee mee mkpebi dịgasị iche iche na-arụ ọrụ na ọrụ ịgba chaa chaa ma anyị chọpụtara na ndị enyere okpu agha dị na ọrụ ịgba chaa chaa ejirila ihe egwu dị egwu ma gosipụta ihe dị egwu, yabụ ndị edemede yiri ka ha na-eji nchebe a ka ọ bụrụ ndị na-enweghị nchekwube ebe ọ na-atụkwu egwu ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ yiri ka ha ga-etinyekwu ihe ize ndụ na ndị na-agba ịnyịnya na nnwale ọzọ bụ Ian na a igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ na a mita mgbe ụfọdụ ọ na-eyi a okpu agha mgbe ụfọdụ na ọ hụrụ na mgbe yi okpu agha ahụ na okporo ụzọ na nkezi na-agagharị, mgbe ụfọdụ dị ize ndụ, n'ihi ya, anyị nwere abụọ kwere omume nkọwa na ọ nwere ike ịdị gị mfe na-na a okpu agha anya nwere ahụmahụ al s Ndị ọkwọ ụgbọala na-emeghachi omume na nkọwa ndị ọzọ a pụrụ ịkọwapụta bụ na Glamor na-eche na ọ na-echebe ma nwee ike itinye ihe egwu.
Yabụ kedu ihe mere mgbe mba mebere okpu igwe anyị chọrọ? Ndị ọkà mmụta sayensị emeela ọtụtụ nnyocha na mba atọ Canada, New Zealand na Australia iji chọpụta ma ọ bụrụ na okpu agha na-emezi nchekwa nke okpu agha - nkwubi okwu ha enweghị ihe akaebe na ha ji waya eme nke a. Ọtụtụ ndị ọkachamara igwe kwụ otu ebe na-ewe iwe n'ezie mgbe mkpọsa nchekwa igwe kwụ otu ebe. dabere na okpu akpu Azụ ahiụ na-adị naanị maka ịkpu okpu igwe igwe oge ọ bụla ị nwere eriri Ọ bụghị ụmụaka na-etinye okpu agha ha na mpako Somefọdụ n'ime nkụda mmụọ ndị a karịa nke kacha mma bụ ChrisBoardman onye bụbu onye mmeri Olympic na-abụ onye na-agba mgba igwe na-ekewa igwe, nke ị na-echekarị nweta mmeghachi omume nke ndị mmadụ na gburugburu ebe enwere m mmetụta na-enweghị enyemaka Enweghị ihe m nwere ike ime Bicycling bụ ọrụ nke onye nsọ Ọ bụ gburugburu ebe dị egwu ọ bụ na anyị ndị Dutch ga-agbanwe emefula afọ 40 na-eme ụzọ ụgbọ ịnyịnya nchebe iru, na ọ fọrọ nke nta ọ dịghị onye na-anya na okpu agha, ma na Netherlands na-agba ịnyịnya ígwè banyere ugboro anọ dị ka mma dị ka Great Britain isi n'okporo ụzọ know mara, ewe a shortcut pụọ ma ọ bụrụ na ị lee anya n'ihu Mmasị maka ndị ọrụ ụzọ niile bụ ọnụọgụ kachasị n'etiti ndị ọkwọ ụgbọ ala. Yabụ ọ bụrụ na a manye onye ọ bụla iyi okpu agha ahụ mgbe ahụ maka ekele maka ikiri, mee ka anyị mata ihe ị chere na nkọwa ndị dị n'okpuru, lelee isiokwu ndị ọzọ na ndị ọzọ na edemede ahụ, ma hụ na ị denye aha maka ihe ndị ọzọ
Kedu ihe bụ ezigbo okpu igwe igwe kwụ otu ebe?
Kemgbe 2011, ndị na-eme nchọpụta na Virginia Tech na-enye enweghị ihu ọmaokpu aghaFim ndị na-azụ ahịa na-enye ha ohere ime mkpebi siri ike mgbe ha na-azụta ụdị dị iche icheokpu agha. Dika ule ha Lazer G1 MIPS bukasị dịrị nchebe ụzọ okpu aghana 2021.
Ego ole ka m kwesịrị ịkwụ maka okpu na-agba ịnyịnya?
.B.okpu igwenwere ikeegoihe ruru $ 25, mana “ezigbo”okpu igwenwere ikeegodikaukwuudị ka $ 500 ma ọ bụ karịa. Dabere na ihe ị chọrọ ya na nke atụmatụ ndị kasị mkpa ka ị, a mmaokpu igwea na-efu n'etiti $ 75 - $ 150. Top-nke-na-akaraokpu igweaegoọzọ, ihe dị ka $ 250 - $ 350.
Ego ole ka ị kwesịrị imefu na okpu igwe?
Gaa na mpaghara gịigwe kwụ otu ebeịzụ ahịa, nagịAga m ahụokpu aghaahịa site na $ 40 ruo $ 300 gbakwunyere.Jul 24 2017 Nọvemba
Gịnị ka MIPS na-anọchi maka okpu agha?
MIPS buacronym maka Multi-Directional Impact Nchedo usoro. Emebere teknụzụ a na 2001 site n'aka ndị otu Royal Institute of Technology dị na Stockholm, Sweden.
Ego ole ka m kwesịrị imefu na okpu igwe?
.B.okpu igwenwere ike na-eri dị ka obere ka $ 25, ma a 'mma'okpu igwenwere ike na-eri dị kaukwuudị ka $ 500 ma ọ bụ karịa. Dabere na ihe ị chọrọ ya na nke atụmatụ ndị kasị mkpa ka ị, a mmaokpu igwea na-efu n'etiti $ 75 - $ 150. Top-nke-na-akaraokpu igwena-efu ihe, ihe dị ka $ 250 - $ 350.
Okpu igwe eji agba igwe emebie?
Testinglọ ọrụ gọọmentị na-anwale na US, Kọmịshọn Na-ahụ Maka Ahịa Ahịa (CPSC), na-atụ aro iji dochie aokpu igwekwa afọ ise ruo iri. Ihe ncheta ncheta nke Snell, nke gosiputaraokpu aghamaka nchekwa, kwuru otu ụlọ ọrụ siri ike afọ ise.Sep 26 2018
Okpu ịnyịnya ígwè dị oke ọnụ ọ bara uru?
6 Azịza. Mba, ogeokpu okpudị ọkụ ma nwee ntụsara ahụ n'ihi na enwekwu ikuku. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịgba ịnyịnya ogologo oge, ọ ka mma ịzụta karịaokpu okpuna ị nwere ike imeli, ma ọ bụghị - maka obere njem - ọnụ alaokpu aghaga-arụ ọrụ ahụ.
Kedu ihe ịchọrọ ịma banyere okpu agha Scott?
Anyị na-etinye okpu okpu Scott maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na ụmụaka, na ọtụtụ n'ime ha na-egosipụta usoro Halo nke na-enye ohere ka okpu agha ahụ sie ike site na iji akara iji dabara nke ọma n'isi. Mgbe ịzụrụ okpu agha, ihe kwesịrị ekwesị dị mkpa, ma ị ga-ahọrọ nhọrọ mgbe niile nwere nke kachasị mma, ebe ọ na-enye nchebe kachasị.
Kedu ụdị okpu igwe kachasị mma?
Ezi okpu agha dị mma bụ itinye ego maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè ọ bụla, Scott bụ otu n'ime ụdị kachasị mma na ahịa. Nke siri ike, nke na-adịgide adịgide, nke a haziri nke ọma ma dị na nhọpụta nke agba na agba, ọtụtụ okpu igwe igwe Scott dị na Bike Addict ga-emerịrị mkpa onye ọ bụla na-agba igwe.
Enwere ike eyi okpu igwe kwụ otu ebe n'isi gị?
Ọ bụrụ na ọ naghị anọdụ ala n'isi gị, nchedo gị, yana uche gị iyi ya, ga-emetụta nke ọma, yabụ jiri amamihe họrọ. Ikwesiri ịhọrọ okpu agha dabara na ụdị ịnya ịnyịnya gị, mana enwere ike iji okpu agha nke ọma n'okporo ụzọ enweghị ntụpọ na okpu igwe kwụ otu ebe mgbe ị nọ n'okporo ụzọ.